Nhema nyeredzi moonstone zvinoreva uye zvivakwa - vhidhiyo
Nhema nyeredzi moonstone zvinoreva uye zvivakwa.
Tenga yakasikwa nyeredzi nyeredzi moonstone muchitoro chedu
Nyeredzi nyeredzi moonstone is sodium potassium aluminium silicate nemakemikari fomula (Na, K) AlSi3O8 uye ndeyeboka re feldspar.
Zita rayo rinouya kubva pane zvinoonekwa, kana kupisa, nokuda kwekusiyanisa kwechiedza mukati memakamuri mashoma anogara aine feldspar layers (lamellae).
Isu takashandisa moonstone muzvishongo zvemamiriyoni, kusanganisira vekare. Varoma vaiyemura iri gemeri, sezvo vaitenda kuti rakazvarwa kubva kumagetsi akasimbisa Mwedzi. Vose vari vaviri vaRoma nemaGreek vakabatanidza mwaranzi nemwari wavo wemwedzi. Mune wazvino nhoroondo. Iyo yakave yakakurumbira munguva yeArt Nouveau nguva. French goldmithmith René Lalique uye nevamwe vazhinji vakagadzira huwandu hwakawanda hwezvishongo vachishandisa dombo iri.
Iyo inonyanya kuzivikanwa mwedzi yeyemineeral adularia, yakatumidzwa nzvimbo yekutanga yemigodhi pedyo neMt. Adular muSwitzerland, ikozvino guta reSt Gotthard. Iyo plagioclase feldspar oligoclase zvakare inogadzira mabwe emafungidziro. Iyo feldspar neine pearl uye opalescent schiller. Rimwe zita riri hecatolite.
Orthoclase uye albite
Nyeredzi nyeredzi moonstone inoumbwa nemaviri feldspar marudzi, orthoclase uye albite. Mhando mbiri idzi dzinopindirana. Zvadaro, sezvo zvitsva zvinotanga kuumbwa, zvinopindirana orthoclase uye albite inoparadzaniswa mumatanda, kushandura zvikamu.
Adularescence ibhuruu sheen phenomena inoratidzira pane yakatarwa cabochon pamusoro peye nhema nyeredzi moonstone. Izvo zvinoitika zvekupenya zvinouya kubva mukubatana kwechiedza pamwe netaundi yemakristani madiki e "albite" mumatombo emwedzi. Nepo hukobvu hwetete yemakristuru madiki ichigadza mhando yebhuruu inopenya. Naizvozvo, kuonda mutete, zviri nani bhuruu flash. Izvi zvinowanzo kuoneka seyakajeka mwenje mhedzisiro.
Deposits moonstone inoitika muArmenia (kunyanya kubva kuLake Sevan), zvakare Australia, yeAustria Alps, Mexico, Madagascar, Myanmar, Norway, Poland, India, Sri Lanka neUnited States.
Uyezve, moonstone ndiyo Florida State Gemstone (USA). Yakanga yakasarudzwa senge muna1970 yekurangarira Mwedzi kumhara, kwakasimuka kubva kuKennedy Space Center. Kunyangwe iri iro Florida State Gemstone, hazviitwe nemamiriro mudunhu.
Feldspars iboka rematombo-anogadzira tectosilicate maminera anoumba angangoita 41% yepasi kondinendi kukanda nekurema.
Inobatanidza kubva kune magma semasipiresi mune zvose zvinoputika uye zvinowedzera zvinyorwa zvinopisa uye zvinowanikwawo mumarudzi akawanda emametororphic rock.
Nhema nyeredzi moonstone zvinoreva uye zvivakwa
Iro dombo rine simba rakasimba rekukubatsira iwe kuti ubatanidze kune remukadzi chikadzi panguva yekufungisisa. Kufanana neakanaka muraraungu wemwedzi wekristaro makristasi iwo anonzwika mukati meakanyanya chakras, ayo anogona kubatsira nekuvandudzwa kwezvipo zvepfungwa. Kutinhira kwavo kunoshanda mukati me sacral kana guvhu chakra kubatsira nekumuka kwemazita matsva uye enoverengeka
Nyeredzi nyeredzi moonstone pasi pe microscope
Labradorite yakafanana nedema mwedzi?
Labradorite inorondedzerwa se plagioclase uye calcium sodium feldspar. Moonstone ndeye orthoclase uye potassium sodium feldspar. Ndokusaka moonstone uye labradorite ari hanzvadzi mabwe. ivo vari mumhuri imwechete asi gemologically ivo vakasiyana.
Mutema wemwedzi hauwanzo kuwanikwa here?
Izvo zvisingawanzoitika nekuda kwekuti zvinosvika sei pakuve uye kwaunogona kuzviwana. Iyo nhema mwedzi yemwedzi ndiyo isingawanzo pamatombo ese emwedzi senge muraraungu wemwedzi nechena remwedzi.
Unoziva sei kuti kana nyeredzi nyeredzi moonstone iri yechokwadi?
Adularescence inofanirwa, zvine mutsindo, kuve yebhuruu. Iyo sheen inofanirwa kuoneka pasi pechiedza pamusoro pekabochon, uye inofanirwa kuonekwa nyore nyore kubva kune akasiyana siyana emakona ekuona.
Tenga yakasikwa nyeredzi nyeredzi moonstone mune yedu gem shopu